ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ် ဖြည့်စွက်အစားအစာနှင့် အာဟာရ
ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဗီတာမင်များသည်အင်ဇိုင်းများပြောင်းလဲမှုအတွက်လုပ်ဆောင်ရမည့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသကဲ့သို့ သတ္တုဓါတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်များကို ကိုယ်ခန္ဓာမှ အလိုအလျှောက်ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ အစားအစာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးများကို စားသုံးခြင်းမှသာရရှိနိုင်ပါသည်။
လူအများစုကနားလည်ထားသည်မှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများကို ပုံမှန်စာသုံးနေခြင်းဖြင့် ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ကို လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြပြီး ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ဖြည့်စွက်အစားအစာ(အားဆေး)များကိုသောက်သုံးရန်မလိုအပ်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း အစားအစာနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို နေ့စဉ်စားသုံးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ အလုံအ‌လောက်မရရှိနိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယနေ့ခေတ်တွင် ဓါတုဓါတ်မြေသြဇာကိုအသုံးပြု၍ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးခြင်း စနစ်သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကြီးထွားစေသော်လည်းအာဟာရတန်ဖိုးအနည်းငယ်သာပါရှိခြင်းကြောင့် လူတစ်ဦး၏တစ်နေ့တာလိုအပ်‌သော ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ကို လုံလောက်စွာမရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ဖြည့်စွက် အစားအစာများကိုပုံမှန်သုံးစွဲသင့်ပါသည်။
ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ဖြည့်စွက်အာဟာရကို ဘယ်လို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?
၁။ အန္တရာယ်ရှိသောဓါတုဗေဒကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးမပြုပဲ သဘာ၀အရင်းအမြစ်များမှရရှိသောသဘာ၀ကုန်ကြမ်းများကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ် ထားသော အာဟာရဖြည့်စွက်အစားအစာမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါသည်။
၂ ။ ကုန်ကြမ်းအဆင့်တွင်ပင် ပျော်၀င်မှုစနစ်(Bioavailability)ကောင်းမွန်စေရန်ပြုလုပ်ထားသောကုန်ကြမ်းများကို ရွေးချယ်ထုတ်လုပ်ထားသော အာဟာရဖြည့်စွက်အစားအစာကိုရွေးချယ်သင့်ပါသည်။
၃။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ထိတွေ့သမျှသက်ရှိ၊သက်မဲ့အရာ၀တ္တုတိုင်းသည် အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ပြုမှုဖြစ်စေပြီး ပျက်စီးယိုယွင်းမှုဖြစ်စေပါသည်။ ဆေးထုတ်ပိုးမှုစနစ်တွင်လည်း ဆေးအလုံးရေ ‘ရာ’နှင့်ချီ၍ထုတ်ပိုးသောပုံစံ(Bulk Pack) များဖြင့် ထုတ်ပိုးခြင်းသည် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်(သို့) နှစ်ကြိမ်ခန့် အဖုံးဖွင့်သောက်သုံးနေရခြင်း‌ကြောင့် ‘လေ’နှင့်အမြဲထိတွေ့ကာအောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ပြုပြီး ကျန်ဆေးများ၏သက်တမ်း(Shelf Life) နှင့် အာနိသင်ကို ကျဆင်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးတစ်လုံးချင်းစီကိုသီးခြားထုတ်ပိုးမှုပုံစံ (Blister Pack) ဖြင့်ထုတ်ပိုးခြင်းသည် ကျန်ဆေးများအား အောက်ဆီဂျင်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှကာကွယ်စေခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးထိခိုက်မှုမရှိစေရန် စနစ်တကျထုတ်ပိုးထားသော အာဟာရဖြည့်စွက်အစားအစာမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါသည်။
၄။ ဓါတုဗေဒကုန်ကြမ်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသောပလတ်စတစ်(synthetic plastic) နှင့်ထုတ်လုပ်ထားသော Capsule ပုံစံဆေးတောင့်များသည် ကာလကြာရှည်သုံးစွဲသူ၏ အသည်း၊ကျောက်ကပ်တို့တွင်ကျန်ရှိနေပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိစေသဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းသော Soft Gelatin ပုံစံ Capsule ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော အာဟာရဖြည့်စွက်အစားအစာကိုရွေးချယ်သင့်ပါသည်။
၅။ သင့်အတွက်လိုအပ်သောဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်များ ပါ၊မပါကိုဆေးဘူးတွင်ဖော်ပြထားသောပါ၀င်ပစ္စည်းများကိုသေချာစွာဖတ်ရှုရွေးချယ်ပါ။
တံဆိပ်အမျိုးမျိုးသော ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ဖြည့်စွက်အစားအစာထုတ်ကုန်များအားလုံးတွင်အရည်အသွေးအားလုံးသည်တူညီခြင်းမရှိကြပါ။ မတူညီသော အာဟာရဖြည့်စွက်အစားအစာထုတ်လုပ်သူ(Manufacturer) များသည် ၎င်းတို့ ပစ်မှတ်ထားသောသုံးစွဲသူ(Customer) များအား ရည်ရွယ်၍ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့၏ အသက်အရွယ်နှင့် ခံစားနေရသောရောဂါများအပေါ်တွင်မူတည်ပြီး မိမိတို့အတွက်လိုအပ်သောဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ပမာဏကို ရွေးချယ်၀ယ်ယူသင့်ပါသည်။
၆။ ဆေးဖက်၀င်အပင်များမှထုတ်လုပ်ထားသည်ဟု ကြော်ငြာကာရောင်းချနေသောအားဆေးများကိုမသုံးစွဲသင့်ပါ။ ဆေးဖက်၀င်အပင်အချို့ သည် သင်ပုံမှန်သောက်သုံးနေသည့် အခြားဆေးဝါးများနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်ကာ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်အထိအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
၇။ စျေးကြီးသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုမှ အရည်အသွေးပြည့်၀သည်ဟုယူဆပြီးရွေးချယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ အာနိသင်ထက် နာမည်နှင့် လှပသောထုတ်ပိုးမှုပုံစံများအတွက်ပိုမိုပေးဆောင်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အရည်အသွေးပြည့်၀သောဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ဖြည့်စွက်အစားအစာကို ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက အာဟာရဖြည့်စွက်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုများကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အတင်းကြပ်ဆုံးစည်းမျဉ်းများကိုပြဌာန်းထားသော ဒိန်းမတ်(Denmark) အစိုးရ၏စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် Good Manufacturing Practice(GMP) နှင့် Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) ၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသော Pharma Nord ၏ Bio-Multivitamins & Minerals သည် လူကြီးမင်းတို့ အတွက်ရွေးချယ်သင့်သော အရည်အသွေးပြည့်၀သည့် ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ဖြည့်စွက်အစားအစာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။